७ भाद्र, २०७७ – Mero UK
Day: ७ भाद्र, २०७७
च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा बायर्न र पीएसजी भिड्दै
७ भाद्र, २०७७ ७ भाद्र, २०७७ / अनलाइन खबर
७ भदौ्, काठमाडौं । युरोपियन क्लब फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता युरोपियन च्याम्पियन्स लिग २०१९-२० सिजनको फाइनल आइतबार राति हुँदैछ । नेपाली समय अनुसार राति पौने १ बजे सुरु हुने खेलमा जर्मन जायन्ट बायर्न म्युनिख र फ्रेन्च च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) बीच खेल हुनेछ । खेल पोर्चुगलको लिस्वनमा हुनेछ । बायर्न सेमिफाइनलमा लियोन र पीएसजी आरबी …
च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा बायर्न र पीएसजी भिड्दै Read More »
माडीले सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झार्न कसरी सक्यो ?
७ भदौ, चितवन । चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये ६ वटामा कोरोनाको संक्रमण फैलिँदो छ । कोरोना संक्रमित भरतपुर महानगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै देखिएका छन् । भौगोलिक र जनसंख्याका हिसावले ठूलो महानगरपालिकामा अन्यत्रको संक्रमित भेटिनु स्वभाविक भए पनि यसको दर भने निकै उच्च छ । सावधानी निकै कम छ । महानगरमा अहिलेसम्म १८३ जना संक्रमित बनेका छन् …
माडीले सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झार्न कसरी सक्यो ? Read More »
संक्रमितको ज्वरो नाप्न सफाइ कर्मचारी पठाउने स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता
७ भदौ, जनकपुरधाम । धनुषाको नगराइन नगरपालिकास्थित गांगुली आइसोलेसनमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टिमलाई प्रादेशिक अस्पताल फिर्ता बोलाइएको छ । सरसफाइ कर्मचारीलाई ज्वरो नाप्न पठाएर आफू आराम गरेको आरोप लागेको एक चिकित्सक, पारामेडिक्स र सरसफाइकर्मीलाई फिर्ता बोलाएको प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड- १९ का संयोजक डा. जामुन सिंहले जानकारी दिए । शनिबार यो आइसोलेसनमा सरसफाइको काम …
संक्रमितको ज्वरो नाप्न सफाइ कर्मचारी पठाउने स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता Read More »
बिहेपछि आँचलको ब्रत
नायिका आँचल शर्मा यो बर्षको तीजमा २ दिन ब्रत बसिन् । तीजको दिनमा ब्रत बसेकी आँचल आज ऋषि पञ्चमीको दिनमा पनि ब्रत बसिन् । आँचल बिहे अगाडि भने ब्रत बसेकी थिइनन् । उनलाई ब्रत बस्दैमा राम्रो श्रीमान् पाइन्छ र ? भन्ने पनि लाग्थ्यो । आँचल भन्छिन्–‘तीजको दिनमा निरहार नै ब्रत बसेँ । बेलुकी उदिपजीको अनुहार …
बिहेपछि आँचलको ब्रत Read More »
७ भदौ, वीरगञ्ज । बारामा भारतबाट तस्करी गरेर ल्याएको रासायनिक मल स्थानीय प्रशासनले बरामद गरेको छ । आइतबार बिहान बाराको सिम्रौनगढ गाउँपालिकाको अन्तर्गतका ४ वटा सिमा नाका अनुगमनका क्रममा ९ वटा मोटरसाइकलमा तस्करी गरी ल्याउँदै गरेको ४० बोरा रासायनिक मल बरामद गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । बरामद मल वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा …
बारामा भारतबाट ल्याएको ४० बोरा अवैध रासायनिक मल बरामद Read More »
वीरगञ्जको कोरोना अस्पतालबाट दुई संक्रमित भागे
७ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा दुई जना कोरोना संक्रमित वीरगञ्ज हेल्थ केयर कोरोना विशेष अस्पतालबाट भागेका छन् । राति २ बजेतिर राउण्डमा गएका स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमित नदेखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । डिलक्स क्याबिनमा बस्दै आएका उनीहरु कसरी भाग्न सफल भए भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अस्पतालको पछाडिबाट हाम फालेर भागेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीको …
वीरगञ्जको कोरोना अस्पतालबाट दुई संक्रमित भागे Read More »